Maka ndị njikwa weebụsaịtị na ọtụtụ azụmaahịa, nnukwu na obere, oge a gara aga bụ oge oyi nke enweghị afọ ojuju ha. Malite na December, ọtụtụ a kpọrọ aha ụlọ ọrụ nka na New York City ikpe, na veranda abụghị naanị ya. Emeela ka ọtụtụ narị suut gbara akwụkwọ na nso nso a megide azụmaahịa, ụlọ ọrụ ọdịbendị, ndị otu na-ahụ maka ọdịmma ya na ọbụlagodi ihe ngosi Beyonce, onye akpọrọ websaịtị na uwe ime ihe gbara akwụkwọ na Jenụwarị.
The ọma ha nwere na-emekarị? Enweghi ike inweta ndi uzo kpuru ìsì ma obu ndi isi. Ndị gbara akwụkwọ gbara akwụkwọ na-arụpụta ihe ndị a rụpụtara iji kpalite azụmaahịa iji webata weebụsaịtị ha nnabata na iwu ndị America nwere nkwarụ, si otú ahụ na-eme ka ndị ìsì na ndị isi kpuru ìsì nweta ha.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ dịka akụkụ nke ọrụ nzukọ gị, ajụjụ ị kwesịrị ịjụ bụ:
Maka ndị ìsì, mkpa maka ịnweta weebụsaịtị - na Nkwenye ADA nke nwere ike ịkwado ya - gbasaa n'ofe mpaghara, site na agụmakwụkwọ na azụmaahịa, ọrụ, ụlọ ọrụ ọdịnala na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ n ’ị na-ahụ ụzọ, chee etu ị si dabere na ntanetị ị na-arụ ọrụ kwa ụbọchị yana ndụ ụlọ gị. Ole weebụsaịtị ka ị na-aga na ụbọchị? Cheedị ihe ọ ga - adị ma ọ bụrụ na ị gaghị enweta saịtị ndị ahụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị, ị na - ahụ ọtụtụ ihe ị na - enweghị ike ịme.
Iwu nkwarụ nke ndị America (ADA) na-amata ndị nwere niile nkwarụ nwere ikike nha anya, gụnyere ndị kpuru ìsì na ndị isi, na nke a pụtara ịnweta ntanetị dijitalụ na ntanetị na mgbakwunye na oghere nkịtị. Ọ bụ n’ọkpụrụ okwu a na iju mmiri ADA nwere ugbu a.
Maka nnukwu azụmahịa, ihe a na-eme maka idozi kwụ ọtọ. Ha nwere akụrụngwa na nnabata, ndị ọrụ iwu na ndị IT iji mee ka websaịtị ha kwekọọ na ihe ADA chọrọ. Ha nwere ike degharịa atụmatụ ma degharịa koodu ngwa ngwa iji kwado mkpa nke ndị ọbịa kpuru ìsì, na-enye ohere ma na-agbatị nnabata.
Mee elu mee ala, ihe a bụ ime ihe ziri ezi. Site na ịnwetawanye ohere, ị na-asọpụrụ iwu ma hụ na enyere ndị mmadụ - agbanyeghị ikike ha - ka enyere ndị ọzọ ohere. Ọ bụghị naanị na ọ dị mma, ọ bụ American, na azụmahịa anyị, ụlọ ọrụ ọdịnala na nnukwu kpakpando dịka Beyonce kwesịrị icheta nke ahụ. Inclusives abughi nani a mma ihe - ọ bụ nri ihe.